မြင်သူတိုင်း ရဲ့ ရင်ကို ဗြောင်းဆန် သွားစေမယ့် ခပ်မိုက်မိုက် ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေး လိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မေဘရဏီစံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / မြင်သူတိုင်း ရဲ့ ရင်ကို ဗြောင်းဆန် သွားစေမယ့် ခပ်မိုက်မိုက် ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေး လိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မေဘရဏီစံ
မြင်သူတိုင်း ရဲ့ ရင်ကို ဗြောင်းဆန် သွားစေမယ့် ခပ်မိုက်မိုက် ပုံလေးတွေ ကို တင်ပေး လိုက် တဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး မေဘရဏီစံ
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာ ကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ တက်သစ်စ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် မေဘရဏီစံ ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ် … ။ ဆွဲမက် ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ နဲ့ ပုရိသ တွေ ရဲ့ ရင် ကို ဆွဲဆောင် ညို့ ယူထားတဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လေး ဖြစ်ပါတယ် … ။ သွယ် လျ ပြေ ပြစ် တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် နဲ့အတူ လှပ ကြည် လင်တဲ့ အသား အရေ ကိုပါ ပိုင် ဆိုင် ထားပြီး သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး လည်းဖြစ်ပါ တယ် … .
လတ် တလောမှာ တော့ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား အလှ တရားတွေ နဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထား တဲ့ အလန်းစား ပုံလေး ကို ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ် … ။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူတွေ များပြား ခဲ့တာ ဖြစ် ပြီး ပုရိသ တွေ အများ ဆုံး ဝန်းရံ ခြင်းခံ နေရ တာ လည်းဖြစ် ပါ တယ် … ။ သူမရဲ့ facebook မှာ အရမ်း လန်းတဲ့ ပုံလေး တွေ တင်ပေး လာတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် .. ။ မေဘရဏီစံ တစ် ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လှရက် လွန်းနေပြီး သူမရဲ့ ပရိသတ်ကြီး အတွက် တင်ပေ းထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူမ ရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ ကတော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင် ကို ညို့ယူ ဖမ်းစား နေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်… ။ ပရိသတ်ကြီ းလည်း မေဘရဏီစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံ လေး ကို ကြည့်ရှု နိုင်စေ ရန်ဖော် ပြ ပေးလိုက် ပါ တယ် … .
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာ ကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တဲ့ တက္သစ္စ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ ေမဘရဏီစံ ကို သိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္ … ။ ဆြဲမက္ ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြ နဲ႔ ပုရိသ ေတြ ရဲ႕ ရင္ ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ ယူထားတဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလး ျဖစ္ပါတယ္ … ။ သြယ္ လ် ေျပ ျပစ္ တဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ နဲ႔အတူ လွပ ၾကည္ လင္တဲ့ အသား အေရ ကိုပါ ပိုင္ ဆိုင္ ထားၿပီး သူမရဲ႕ အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ သူေလး လည္းျဖစ္ပါ တယ္ … .
လတ္ တေလာမွာ ေတာ့ သူမ ရဲ႕ အမိုက္ စား အလွ တရားေတြ နဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထား တဲ့ အလန္းစား ပုံေလး ကို ေဖာ္ျပ ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္ … ။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူေတြ မ်ားျပား ခဲ့တာ ျဖစ္ ၿပီး ပုရိသ ေတြ အမ်ား ဆုံး ဝန္းရံ ျခင္းခံ ေနရ တာ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ သူမရဲ႕ facebook မွာ အရမ္း လန္းတဲ့ ပုံေလး ေတြ တင္ေပး လာတာပဲ ျဖစ္ ပါတယ္ .. ။ ေမဘရဏီစံ တစ္ ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ နဲ႔ လွရက္ လြန္းေနၿပီး သူမရဲ႕ ပရိသတ္ႀကီး အတြက္ တင္ေပ းထား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူမ ရဲ႕ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ အလွ ကေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္… ။ ပရိသတ္ႀကီ းလည္း ေမဘရဏီစံ ရဲ႕ အမိုက္စား ပုံ ေလး ကို ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ေစ ရန္ေဖာ္ ျပ ေပးလိုက္ ပါ တယ္ … .
Previous post ဆက်ဆီ ကျတဲ့ နေရာမှာ သင်ဇာ ကို မမှီလောက် ဆိုတာ သက်သေ ပြ လိုက်တဲ့ အကြမ်းစား ပုံများ
Next post အလန်းစား ပိုစ့်တွေ နဲ့ ရင်ခုန် အောင် လုပ်လိုက် တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး